एलईडी विज्ञापन भाडा चरण P3.91 भित्ताको बुद्धिमानी प्रवृत्ति - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
LED इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन टेक्नोलोजी अझ बढी परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ. हामी अब परम्परागत उत्पादनहरु संग परिचित छौं. सानो स्पेसिing, नयाँ विचारहरु, नग्न आँखा थ्रीडी र बुद्धिमान क्लाउड टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहित गरिएको छ र प्रयासहरू जारी राख्न. तिनीहरू विभिन्न एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन निर्माताहरूमा फराकिलो व्यापकको मुद्रामा फैलाइरहेका छन्.
इन्टरनेट को विकास संग, LED इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भिडियो नेटवर्क अधिक र अधिक व्यापक प्रसारण, प्रान्तहरू र शहरहरू मात्र होइन, तर पनि समुद्र पार. यो मात्र क्षेत्र पार गर्न सक्दैन, तर जानकारी पनि पुर्‍याउनुहोस्. हामी नयाँ समाचार वा तस्बिरहरू नियन्त्रणको एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन क्लस्टरमा बटनको एक क्लिकको साथ प्रदर्शन गर्न सक्दछौं, र यसको प्रभाव र प्रसारण धेरै टाढा पहुँच भन्दा पहिले पुग्न. तथापि, केहि विशेष ठाउँमा, यी सीपहरूले आवश्यक प्रदर्शन भिडियो प्रदान गर्न सक्दैन. एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको साधारण प्रयोग प्रदर्शन छ, र विविध र अन्तर्राष्ट्रिय शपिंग मल्ल तिर जान्छ, जुन व्यापक रूपमा देश र विदेश मा सबैले विश्वास गर्दछ.
गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी लाभ हो. उत्पादनहरूसँग मात्र उपन्यास उत्पाद संरचना हुँदैन, तर पनि नवीन लाभ मोडेल छ. के फाइदा छन्? सेन्सरहरूको डाटा संग्रह पछि, मौसम, परिवेश तापमान, आर्द्रता, PM2.5 सामग्री र अन्य जानकारी LED इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनमा प्रदर्शित हुन्छन्. यदि यो ट्राफिक निर्देशन पर्दा हो, नियन्त्रण केन्द्र मार्फत, सर्भर द्वारा संकलित सडक जानकारी प्रत्येक LED ठूलो पर्दामा पठाइन्छ, जसले सबैको जीवनमा ठूलो सुविधा ल्याउँछ.
एक साथ बुद्धिमान विकासको लागि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, केही सुरक्षा प्रश्नहरू पनि ल्याए. उदाहरण को लागी, त्यहाँ प्रायः समाचारहरू छन् जुन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनहरूले असभ्य भिडियो र छविहरू प्रसारण गर्दछ, वा सामग्री चुहावट प्रश्नहरू समावेश गर्दछ. हामीले नेटवर्क उपकरणको राम्रो उपयोग गर्नु पर्छ, र बौद्धिक प्रकार्यमा सुधार गर्दछ, बुद्धिमानको प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरीहरू र असुरक्षित जोखिमहरू समाधान गर्नुहोस्, ताकि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन तपाईं राम्रो सेवा गर्न सक्दछ.
LED इलेक्ट्रॉनिक भिडियो भित्ता स्क्रिन उद्योग समस्याहरूको विश्लेषण